Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: » Amakhaya okuhlala » Studios » GB » London » Yindlu e studio eqaqambileyo yokurenta eCricklewood1
Uhlaziyo lokugqibela 2020-01-17
Iguqulwe i-1 kwinyanga ephelileyo
Isimo: Imeko elungileyo
Uhlobo lwenkqubo yokupholisa: nanye
Inombolo yelizwe:: NW2 4LY
Esi sakhiwo sithandekayo sise studio eMelrose Avenue, eCricklewood sigciniwe. Ipropathi eqaqambileyo inomhlobiso omtsalane, kunye nomhlobiso wesitayile kunye nempahla yefashoni. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo, kwaye kukho igumbi lokuhlambela eli-1 elinobuhle kunye neshawari.
ICricklewood yindawo yokuhlala ikakhulu efumaneka ngaphandle kumbindi weLondon. Kukho iivenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela ezilungileyo zalapha ngaphakathi ekufikeleleni ngokulula, kunye neepaki ezithandekayo zokuphonononga kwiintsuku zehlobo ezinelanga.
isiphumo 5.0 Stars 1 iivoti
Ibhaliswe kwi-17. NguJan 2020
Ibhaliswe ngoJanuwari 17, 2020
Izikolo ezikufutshane ne-NW2 4LY